Soo dejisan CCleaner 5.76.8269 Standard... – Windows – Vessoft
WindowsNidaamkaNadiifinta & WaxyeelayntaCCleaner
CCleaner – software caan ah si aad u nadiifiso iyo tayadoodii nidaamka. software The saaraysaa software rakibay, helaa faylasha loo baahan yahay, dib u soo celisa shaqo nidaamka, configures autorun ah, iwm CCleaner qabata falanqaynta faahfaahsan nidaamka joogitaanka of qashin file iyo nadiifin meel ka soo xogta aan loo baahnayn. software The baadhaa dhibaatada ka jirta diiwaanka, wuxuu diyaariyaa khaladaad nidaamka iyo bandhigayaa warbixin ku saabsan shaqada la fuliyay. CCleaner nadiifiyaa taariikhda waxqabad online in daalacashada iyo codsiyada kala duwan.
boos lacag la’aan ah ka mid ah qashinka faylka
Nadiifanta iyo qamaar ah khaladaadka ku jira diiwaanka
ka saarida software Quick
Nadiifiyaa taariikhda waxqabad online